Uncwadi lweentsuku ezimbi | Uncwadi lwangoku
Ngubani omnye kwaye ngubani ongaphantsi kunosuku olubi ngamaxesha athile (ndinqwenela ukuba ibinye, akunjalo?). Ke ngoko, ndisebenzisa ithuba lokuba kule mpelaveki, sinexesha elininzi lokufunda, ukucinga, ukuphumla kunye nokuphumla, ndikushiyele le mibhalo mibini zii-greats zoncwadi: Walt Whitman y Pablo Neruda. Ngamnye kwisitayile sakhe kodwa ngomyalezo oqhelekileyo: phila, phila uphile.
Ukuba unosuku olubi, nangasiphi na isizathu, funda le mibhalo mibini. Ndiyathembisa ukuba emva kokuyifunda, uya kuziva ungcono kancinci kwaye uqala ukubona izinto ngenye indlela. Kuba kukho uncwadi lweentsuku ezimbi. Kuba ukufunda kunokuba lunyango olukhulu ngokuchasene nokudimazeka.
"Musa ukuyeka" nguWalt Whitman
Musa ukuvumela usuku luphele ungakhange ukhule kancinci,
ungonwabanga, ungakhange wandise amaphupha akho.
Musa ukoyiswa kukudimazeka.
Sukuvumela nabani na ukuba athathe ilungelo lokuziveza,
ephantse ukuba iyimfuneko.
Sukuyeka umnqweno wokwenza ubomi bakho bube yinto engaqhelekanga.
Sukuyeka ukukholelwa kuloo magama nakwisihobe
Nokuba yeyiphi na intsingiselo yethu.
Singabantu abagcwele uthando.
Ubomi buyintlango kunye ne-oasis.
isenza abalinganiswa abaphambili
Nangona umoya uvuthuza ngokuchasene,
umsebenzi onamandla uyaqhubeka:
Unokuba negalelo kwisitanza esinye.
Ungaze uyeke ukuphupha,
kuba emaphupheni umntu ukhululekile.
Musa ukuwela kweyona mpazamo imbi:
Uninzi luhlala kuthe cwaka loyiko.
"Ndikhupha isikhalo sam ngapha kophahla lweli hlabathi",
Uxabisa ubuhle bezinto ezilula.
Unokwenza imibongo emnandi malunga nezinto ezincinci,
kodwa asinakho ukuzicukuceza.
Oko kuguqula ubomi bube sisihogo.
Lonwabele uvalo olukubangelayo
yiba nobomi ngaphambili.
Cinga ukuba kuwe ikamva
kwaye ujongane nomsebenzi ngekratshi kwaye ngaphandle koloyiko.
Funda kwabo banokukufundisa.
Amava abo bangaphambi kwethu
"Iimbongi zethu ezifileyo",
kukunceda uhambe ebomini
Uluntu lwanamhlanje sithi:
Musa ukuvumela ubomi budlule kuwe ungakhange ubuphile ...
"Ungasoli mntu" nguPablo Neruda
Ungaze ukhalaze nangubani na okanye nantoni na
Uyenzile le nto ubuyifuna ebomini bakho.
Yamkela ubunzima bokuzakha
Kwaye isibindi sokuqala ukuzilungisa.
Indoda yokwenene yoyisa
Iyaphuma eluthuthwini lwesiphoso sayo.
Ungaze ukhalaze malunga nesizungu sakho okanye ithamsanqa lakho
Jongana nayo ngenkalipho kwaye uyamkele.
Ngandlela thile sisiphumo sezenzo zakho
Kwaye kungqina ukuba uhlala uphumelela.
Musa ukuba krakra ngokusilela kwakho
Musa ukuyihlawulisa komnye.
Yamkela ngoku okanye uya kuqhubeka
Khumbula ukuba naliphi na ixesha
kwaye akukho namnye woyikekayo ukunikezela.
Ungalibali ukuba unobangela wangoku kukudlulileyo;
njengokuba unobangela wekamva lakho uya kuba ukhona ngoku
Funda kwisibindi, ukusuka komeleleyo;
Kulabo abangazamkeliyo iimeko,
Ngubani oza kuhlala ngaphandle kwayo yonke into.
Cinga kancinci malunga neengxaki zakho
Kwaye ngakumbi emsebenzini wakho
kwaye izisombululo ziya kuza kukuhlangabeza zodwa.
Funda ukuzalwa usentlungwini
Kwaye ukuba mkhulu
Jonga kwisipili sakho kwaye uya kukhululeka kwaye womelele
Kwaye uza kuyeka ukuba ngunodoli weemeko
Kuba nguwe umyili wekamva lakho.
Vuka ujonge ilanga kusasa
Uphefumle ukukhanya kokusa.
Uyinxalenye yamandla obomi.
Ngoku vuka, ulwe, uhambe, yenza ingqondo yakho
Kwaye ke uya kuphumelela ebomini;
Ungaze ucinge ngethamsanqa, kuba ithamsanqa kunjalo
Ucinga ntoni ngezi ndima? Ngaba ucinga ukuba, njengoko ndisenza mna, ukuba uncwadi "lunokukusindisa" kwiimeko ezithile? Ngaba unaso esinye isicatshulwa sokukunceda kwaye ufuna ukwabelana ngaso? Impelaveki emnandi!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Uncwadi lweentsuku ezimbi
Ndikwacebisa ngeentsuku ezimbi (kunye ezilungileyo) zokufunda uCarmen Guillén
Amathala eencwadi edijithali esinokuthi sibonisane nawo simahla